AMISOM oo sheegtay inay isku fureyso waddooyin ka tirsan Hiiraan – War La Helaa Talo La Helaa
Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland oo ka hadlay xariga Wariye Tallman
Ehelada Taliyihii ciidamada Gorgor oo diiday in la aaso meydkiisa
XOG:MD Farmaajo oo sameystay qorshe mudo kororsi usameyn karo xilkiisa iyo damaca…
Guddoomiye Muudeey “uma baahnin warbaahinta madaxabanaan”
DEG DEG: Wararkii uggu dambeeyay xaalka Kismaayo & Itoobiya oo soo xireysa…
DEG DEG+FIIRSO: Go’aanka DF ka qaadatay Maxkamadda ICJ oo Shacabka Somaliyed…
DEG DEG: Xiisada Farmaajo & Axmed Madoobe oo halis gaartay & CC Shakuur oo…
XOG XASAASI AH: Madaxweyne Deni oo Dalab Cajiib ah ka diiday Farmaajo, garab…
GORFEYNTA GACAL IYO GAYAAN W\_Q:- Garaad Nuur Xuseen Maxamuud
(Alifleeydii siyaasadda ee Saynisyahanada ismooday! ) (Qaybtii labaad))
Alifleeydii Siyaasadda Ee Saynisyahanada Ismooday!
AMISOM oo sheegtay inay isku fureyso waddooyin ka tirsan Hiiraan
By madoobe	 Last updated Oct 12, 2018
War qoraal ah oo ay AMISOM ku daabacday boggeeda Twitter-ka ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay qaadayaan howlgallo lagu doonayo in xor laga dhigo, dhaq-dhaqaaqa Hiiraan gaar ahaan wadada isku xirta magaalooyinka Baladweyne iyo Jalalaqsi ee gobolkaasi.
AMISOM waxa ay sheegtay in dhibaato badan ay ka taagan tahay wadadaasi, howlgalladana ay rajeynayaan in wax uu ka badali doono amniga guud ee gobolka Hiiraan.
“Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxay qaadayaan howlgal wada jir ah oo lagu doonayo dhaq dhaqaaqa xoriyadda wadooyinka, ciidamada waxay furayaan waddooyinka ugu muhiimsan ee isku xira Baladweyne iyo Jalalaqsi”. ayaa lagu yiri qoraalka la soo dhigay barta Twitterka AMISOM.
AMISOM waxa ay sheegtay in ay rajeyneyso isku furista wadadan ay fududeyn doonto gargaarka bini’aadanimada, ee la doonayo in la gaarsiiyo dadka ku nool halkaasi.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay dhawaan in ciidamada Soomaaliya ay ka kala bilaabeen howgallo Baladweyne iyo Balcad, waxa uuna xusay in ay isugu imaan doonaan deegaanka Fiidow.
DHAMBAAL KU SOCDA AXMAD XAAF
Madaxweyne Xaaf oo Mooshin laga Gudbiyay